မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ချို့ယွင်းချက်၊ အားနည်းချက်များ ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေရသလဲ | dawnmanhon
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ချို့ယွင်းချက်၊ အားနည်းချက်များ ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေရသလဲ
နှစ်ရှည်လများ စစ်ပွဲဆင်နွှဲနေသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အုပ်စုများအချင်းချင်း ရေရှည်တည်တံ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးတရပ်ရှာဖွေရန် မြန်မာအစိုးရနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကြိုးပမ်းမှုများသည် စမ်းတ၀ါးဝါး၊ အထစ်ထစ်အငေါ့ငေါ့ ဖြစ်နေသည်။
တိုင်းပြည်၏ မြောက်ဘက်နှင့်အရှေ့ဘက်တွင် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည်။ တချိန်တည်းတွင် ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လက ပထမအကြိမ်၊ မေလတွင် ဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပခဲ့သည့် ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံသည် လက်နက်ကိုင်အုပ်စုများကို ရင်ကြားစေ့အောင် အချင်းချင်းသင့်မြတ်အောင် ကြိုးပမ်းနိုင်ခြင်း မရှိပေ။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်(NCA) အား လက်ခံလာအောင်လုပ်ရေးဆိုသည်မှာ အစိုးရအဖို့အတော့်ကို မလွယ်ကူ သည့်အခြေအနေတရပ် ဖြစ်နေသည်။
ပို၍ဆိုးသည်မှာ ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA)၊ တအာင်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့၊ (TNLA) ၊ မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ (MNDAA) အပါအ၀င် တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ခုနစ်ဖွဲ့တို့က ယူ နိုက်တက် '၀'ပြည်နယ်တပ်ဖွဲ့ (UWSA) နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ UWSA သည် မဟာမိတ်အဖွဲ့တဖွဲ့ကို ဦးဆောင်နေပြီး တဖွဲ့ချင်း စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးအား ဆန့်ကျင်လျက် အစိုးရအနေနှင့် ၎င်းတိုအား တခုတည်းသောအဖွဲ့အဖြစ် ဆက်ဆံရန် တောင်းဆိုနေသည်။
တရုတ်ပြည်၏ အခန်းကဏ္ဍကလည်း မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို နောက်ထပ်ရှုပ်ထွေးစေသော အကြောင်း အချက်တရပ်ဖြစ်နေသည်။ တရုတ်အစိုးရသည် လက်နက်အကြီးအကျယ်တပ်ဆင်ထားသည့် UWSA နှင့် ခိုင်မာသည့် ဆက်ဆံရေးများ ထားရှိသည်။ တရုတ်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထောက်ခံသည်ဟုသာ လူသိရှင်ကြား ပြောသည်။ အမှန်တကယ်မူ တရုတ်ပြည်၏ အခန်းကဏ္ဍသည် ပြောစကားထက် လက်တွေ့တွင် အများကြီးပို၍ တက်ကြွလှုပ်ရှားနေသည်။
တရုတ်အစိုးရသည် ၎င်းလိုလားသည့် ရလဒ်များပေါ်ထွက်လာစေရန် မြန်မာအစိုးရကိုရော၊ တိုင်းရင်းသားလက် နက်ကိုင်အုပ်စုများကိုပါ ဖိအားပေးနေသည်။ တချိန်တည်းတွင် တရုတ်အစိုးရသည် UWSA နှင့် ၎င်း၏ မဟာမိတ်များအား လက်နက်တပ်ဆင်ပေးခြင်းဖြင့် ပဋိပက္ခကြီးထွားအောင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။
''မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နှစ်ရှည်လများ ပြည်တွင်းစစ်လတ်တလော အဆုံးသတ်ရေးဟာ တရုတ်ပြည်ရဲ့ မဟာဗျူဟာ အကျိုးစီးပွားမဟုတ်ဘူး။ တရုတ်အစိုးရဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ဦးဆောင်ဦးရွက်အခန်းကဏ္ဍတရပ်မှ ပါဝင်နေကြောင်း ပြတ်ပြတ်သားသား ပေါ်ထွက်လာပါတယ်''ဟု မြန်မာ့အရေးကျွမ်းကျင်သူ ဘာတေးလစ်တနာက Asia Times ၌ မကြာမီက ရေးသားခဲ့သည်။
''ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ရှည်ကြာမှုက တရုတ်ရဲ့ စေ့စပ်ဖျန်ဖြေရေး အခန်းကဏ္ဍကို အခိုင်အမာပြောဆိုဖို့ တရုတ်ပြည်အား အခွင့်အရေးတရပ်ပေးရာရောက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာသို့ မဟာဗျူဟာ ထွက်ပေါက်ရရေး တရုတ်အစိုးရရဲ့လိုအင်ဆန္ဒအပါအ၀င် အလျှော့ပေးမှုများ နှင့် အခွင့်အရေးများမှတဆင့် အပြန်အလှန်လုပ်ဖို့ မြန်မာအာဏာပိုင်များကို ဖိအားပေးလာနိုင်ပါတယ်''ဟု ဘာတေးလစ်တနာက ပြောကြားသည်။
ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင် တပ်မတော်နှင့် KIA တပ်မတော်နှင့် TNLA တို့အကြား စစ်ရေးတင်းမာမှုများကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးသူ အရေအတွက်တိုးပွားလျက်ရှိသည်။ ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်မြို့အခြေစိုက် ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး ရေမွန်ဆမ်လွတ်ဂန်က ကချင်ပြည်နယ်တွင် တိုက်ပွဲရှောင် ဒုက္ခသည်များ၏ အခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားလာနေကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ ပိုမိုလိုအပ်နေကြောင်း မကြာသေးမီက ပြောကြားခဲ့သည်။
''တိုက်ပွဲတွေ ပြန်ဖြစ်လာတာနဲ့အတူ လူထောင်ပေါင်းများစွာဟာ သူတို့ရဲ့နေအိမ်များမှ ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ တိုက်ပွဲရှောင်တွေရဲ့အခြေအနေပိုဆိုးလာပုံရတယ်။ တိုက်ပွဲ ရှောင်တွေ သူတို့ရဲ့နေအိမ်များသို့ မပြန်နိုင်တဲ့အတွက် ဘုရားကျောင်းအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်းထံမှ အကူအညီလို အပ်နေပါတယ်။ တိုက်ပွဲတွေ ကြိုးကြားဆက်ဖြစ်နေပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးက အလှမ်းဝေးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်''ဟု ဘုန်းတော်ကြီး ရေမွန်ဆမ်လွတ်ဂန်က ပြောသည်။
တိုင်းပြည်၏ နယ်မြေကို မရမက ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အုပ်စုများအား မည်မျှပင် ပေးဆပ်ရသည်ဖြစ်စေ နှိမ်နင်းမှုမပြုဘဲ ရေရှည် ခိုင်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီ ချက်တရပ် ရရှိရန် တပ်မတော်အနေနဲ့ အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားနေသည်ဟု မြန်မာ့အရေးအပေါ် နှစ်ရှည်လများလေ့ လာအကဲခတ်သူအချို့က ယုံကြည်နေကြသည်။
Ref; (http://the diplomat. com, why Is Myanmar's Peace Process Still Failing by Luke Hunt?
dawnmanhon: မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ချို့ယွင်းချက်၊ အားနည်းချက်များ ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေရသလဲ